रोकियो काँग्रेस महाधिवेशन, नेताहरु तैँचुप, मैचुप | Ratopati
रोकियो काँग्रेस महाधिवेशन, नेताहरु तैँचुप, मैचुप
personलोकेन्द्र भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक ५, २०७८ chat_bubble_outline0
नेकपा एमालेमा महाधिवेशनको रौनक बढे पनि नेपाली काँग्रेसमा भने महाधिवेशनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । दुई वर्षदेखि महाधिवेशनको तयारीमा रहेको काँग्रेस कार्यतालिका हेरफेरमै रुमलिएको छ । ६४ जिल्लामा महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भए पनि सहज रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सुर्खेत, डोल्पा, कैलाली, रसुवा र बाँके गरी १३ जिल्लामा अझै वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । यीमध्ये रसुवा बारा र रौतहटको क्रियाशील सदस्यताको सूचीसमेत सार्वजनिक भएको छैन । यसले महाधिवेशनबारे अन्योल थपेपछि काँग्रेसका नेता–कार्यकर्ता बिलखबन्दमा परेका छन् ।
महाधिवेशन गराउनुपर्ने संवैधानिक सीमा पार भइसक्दा नेताहरु तैँ चुप, मै चुपको अवस्थामा छन् । वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति नै महाधिवेशनको पक्षमा नदेखिएको आरोप लाग्न थालेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कैलालीको कार्यक्रममा महाधिवेशन गर्ने कुरा आफ्नो हातमा नरहेको बताएका छन् । काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको निर्वाचन समितिको हातमा रहेको देउवाको भनाइ छ ।
१४ औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा देउवाले भने, ‘राष्ट्रिय चुनाव गर्ने निर्वाचन आयोग भएजस्तै काँग्रेसको महाधिवेशन गर्न स्वतन्त्र निर्वाचन सिमित छ । पार्टीको निर्वाचन कमिटीले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै बाढी–पहिरो लगायतका कारण समस्या भएको बताए । दुई वर्षसम्म अधिवेशन गर्न नसकेपछि देउवाले यतिबेला बाढी पहिरोको तर्क झिकेका छन् । उता, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने आफू सधैं महाधिवेशनको पक्षमा रहेको बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘क्रियाशील विवाद टुंग्याएर महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेको छ । केही दिनमै महाधिवेशनको प्रक्रिया सुचारु हुन्छ होला ।’
महाधिवेशनबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दा पनि सभापतिले सुनुवाई नगरेको पौडेलको आरोप छ । नियमित समयमै महाधिवेशनका लागि आफूले महासमिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव गर्दा साथ नपाएको उनको गुनासो छ ।
देउवा–सिटौलासँग किन टाढिए गगन र विश्वप्रकाश ?
​काँग्रेसले २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना संक्रमण, क्रियाशील सदस्यता विवाद र अन्तर पार्टी समायोजन प्रक्रियामा कारण भदौ ७ देखि १० सम्मका लागि महाधिवेशन सारियो । तर, क्रियाशील सदस्यता विवाद र कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर फेरि भदौ १६ देखि १९ सम्म गर्ने निर्णय भयो । क्रियाशील सदस्यताको विवाद सुल्झाउन नसकेपछि संविधानलाई नै चुनौती दिँदै मंसिर ९ देखि १३ सम्म सारिएको छ ।
नयाँ कार्यतालिका ल्याउन मुद्दा बाधक ?
अब फेरि मंसिर मसान्तसम्म सार्ने तयारी भइरहेको छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था आएको निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवले रातोपाटीलाई बताए । ‘दुई दिनमा सबै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्छौँ । नयाँ तालिका बनाउने अवस्था छ । नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेर नयाँ कार्यतालिका बनाउँछौं,’ उनले भने ।
अदालतको एउटा मुद्दाका कारण नयाँ कार्यतायिलका ल्याउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोकमा शिक्षकहरु काँग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन नपाउने विषयमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उक्त विषयमा छलफलका लागि सात गते बोलाएको यादवले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अदालतको मुद्दा नपखौं भने समस्या हुन्छ । सिन्धुपाल्चोकको हकमा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ । तर, त्यसको असर सबै जिल्लामा पर्छ । त्यसले हामीलाई नयाँ कार्यतालिका बनाउन रोकेको छ ।’
केन्द्रीय कार्यसमिति बाहिर रहेका युवा नेताहरुले भने महाधिवेशन फेरि सार्ने तयारी भइरहेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । नेता रञ्जित कर्णले समयमा महाधिवेशन नहुनुमा सिंगो केन्द्रीय कार्यसमिति जिम्मेवार रहेको बताए । ‘वर्तमान केन्द्रीय कमिटीको वैधानिक र संवैधानिक म्याद पनि सकिसकेको छ । यो अवैधानिक केन्द्रीय कार्यसमिति हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘साम, दाम र षड्यन्त्र पूर्वक विभिन्न छिद्र खोजेर वैधानिक देखाउने काम भएको छ । यसमा सिंगो केन्द्रीय कार्यसमिति जिम्मेवार छ ।’
महाधिवेशन गराउन दबाव दिन आफू आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन लागेको पनि कर्णले बताए । यस्तै काँग्रेसका युवा नेता नैनसिंह महरले काँग्रेसको चरित्र नै गुम्ने खतरा बढेको बताए । उनले भने, ‘काँग्रेसले आफ्नो विधान र मुलुकको संविधानअनुसार पनि जाने कुरालाई पनि ख्याल गरेन । यसबाट काँग्रेस आफ्नो वास्तविक चरित्र गुम्ने खतरा बढ्यो । यो कुरा पार्टी नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ ।’
काँग्रेस सभापतिका दाबेदार : १३ औँ महाधिवेशनमा कसको मत कति ?
​काँग्रेसको महाधिवेशन तोक्दै स्थगित गर्दा गर्दै पार्टीको विधान र संविधानले दिएको समय सीमा कटिसक्दा पनि नेतृत्व गम्भीर नबनेको उनको आरोप छ । ‘काँग्रेसको महाधिवेशन तोक्दै स्थगित गर्दा गर्दै विधानले दिएको समय सीमा सकियो । संविधानले दिएको समय सीमा सकियो । पार्टी नेतृत्व यसमा गम्भीर देखिएन,’ महरले भने, ‘सिंगो केन्द्रीय कार्यसमिति महाधिवेशनको खिलापमा भएको भान हुन थाल्यो । पार्टीले संवैधानिक संकट खेपिराख्दा पनि सबै नेताहरु तैँ चुप, मैचुप हुनुहुन्छ ।’
एमालेको महाधिवेशन प्रक्रियाले गति लिएपछि काँग्रेस नेताहरुलाई नैतिकताको कसीमा बाँध्ने महरको भनाइ छ । ‘नेताहरु नैतिकताको कसीमा हुनुहुन्छ, एमालेले छोटो समयमै महाधिवेशन गर्दैछ । अब काँग्रेस नेतृत्व नैतिकताको कसीमा बाँधिने छ,’ महर भन्छन्, ‘एमालेले त विधान महाधिवेशन गरिसक्यो । आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने पार्टीले महाधिवेशन गरेन भने के होला भन्ने नैतिकताको डरले महाधिवेशन गर्लान् कि भन्ने आशा हो ।’
उनका अनुसार आम निर्वाचन र पार्टीको आन्तरिक आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्र बाँचेको हुन्छ । ‘अधिकारको संरक्षणका लागि सबैभन्दा पहिले सम्झिने भनेको नेपाली काँग्रेसलाई नै हो । हामी काँग्रेसलाई लोकतन्त्रको पर्यायवाची भन्छौं । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै आवधिक निर्वाचन हो,’ महर भन्छन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मत परिणाम गठबन्धन कमजोर हुने सङ्केत : महासचिव पोखरेल
गुरु बराललाई एमालेकै सांसदबाट धोका !
युक्रेन संकट : रुससँग युद्ध सुरु भइसकेको छ भनेर कसरी थाहा हुनेछ ?